Interview with Dr Zaw Wai Soe (July 12/2021) – PVTV Myanmar
2021-07-12 at 5:53 PM
အကြမ်းဖက် မအလ စကစ ကိုယ်တိုင်က Covid-19 နဲ့ပြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေခြင်းအားအမြန်ကယ်တင်ဖို့လိုပါသည်
love soung says:
2021-07-12 at 5:57 PM
အော်မင်းတောင် ထွက်ပြေးနေရတာ ပြည်သူအတွက်မင်းကာကွယ်ဆေးမင်းဝင်နိင်ပါမလာ လေပဲရှိနေ
hlamoe thu says:
2021-07-12 at 6:10 PM
ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့်NUG CRPH မှနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူ့အတွက်ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းကြသောအမေစု သမ္မတကြီးနှင့်ခေါင်းဆောင်အားလုံးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းဝေးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ🙏🙏🙏
Thanks and respect sayar, may everyone be safe in covid pandemic.
2021-07-12 at 6:26 PM
Online ပေါ်က အစိုးရပုံစံနဲ့ Online ပေါ်ကနေ ကူညီနေလို့မရပါဘူး။ စကစကိုတော်လှန်နေတောင် ပြည်သူတွေအတွက် မြေပြင်မှာ ထိရောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အရေးတကြီးလိုနေပါပြီ။ ပြည်သူတွေလဲနာလှပါပြီ ဆရာတို့လို ဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာ ရှိမနေပါဘူး။ Online ပေါ်က အပြောသပ်သပ်မဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေကို တကယ်ထိထိရောက်ရောက် ကူညီနိုင်မဲ့ အကူအညီမျိုး မျှော်လင့်ပါတယ်။
2021-07-12 at 6:39 PM
ဘာ ဆရာလဲ အခုေတာ့ မင္းဟာ ႏြား ေခြးထုတဲ႔ဆရာေလာက္ေတာင္ အဆင့္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာေကာ သိရဲ႕လား ျပည္ေျပး အၾကမ္းဖက္ လူသတ္သမား ဇေဝဇဝါ စုိးေရ ။
ခွေဟောင်လို့မိုးမလင်းဘူး အဝေးကနေပဲ ဟောင်
nay darly says:
ေစာက္ရူး မေအလ္ိုးအခု channel ပိုင္ရွင္လည္း ကိုယ္အေမသာကိုယ္ျပန္လိုးလိုက္ပါေတာ့ကြြာ
2021-07-12 at 7:47 PM
Daw Thidar says:
2021-07-12 at 8:49 PM
2021-07-12 at 8:53 PM
2021-07-12 at 8:56 PM
Tinzawmoe Tinzawmoe says:
Ajjsjs Shshs says:
Dr. NUG. မိသားစုနဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများကျန်းမာပါစေ
2021-07-12 at 9:57 PM
​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ ဆရာၾကီး ​ေန​ေကာင္​းက်န္​းမပါ​ေစ
Jessica Nang says:
2021-07-12 at 10:56 PM
သူက ဘာလို့ နှာခေါင်းတွေ ပါးစပ်တွေ အုပ်ထားတာလဲ 😂 online ကနေမေးတာချည်းကိုပဲ
2021-07-13 at 1:35 AM
2021-07-13 at 1:17 PM
ယုံလိူ့မဲပေးခဲတယ် နိုင်ငံပျက်သုဥ်းဘလုညွန့်တုန်းအောင်ခုပ်ခဲတယ် ခေါင်ဆောင်မကောင်းလို့ ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာတွေ သောက်ရှက်မရှိတဲ့ဇော်ဝေစိုး
Noble Ignore says:
2021-07-13 at 4:53 PM
SaCaSa is just only power crazier devil beasts folks, and are decpacitating and functionless with total lack of any accountability and responsibility.
2021-07-13 at 5:07 PM
Sayagyi is just acknowledging peoples who are seeing this interview, the need for wearing mask and head cap in such epidemic heavy wave by wearing those on himself during interview.
2021-07-13 at 5:15 PM
Get united into one solid unity would be better under kindful leadership by good government who paying full respect to national peoples, unlike Cruel military stray dog shxthole SCS lacking any kindful respect to peoples.
2021-07-13 at 7:37 PM
Ye Yint Thwe says:
2021-07-14 at 9:34 AM
PKN LEADER says:
2021-07-15 at 12:20 AM
မင်းဒို့အစိုးရကနေရာအတည်တကျမရှိဘဲနဲ့ ငါဒို့ပြည်သူကဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ မေးတဲ့သူလည်းနေရာမရှိဖြေတဲ့သူလည်းနေရာမရှိ ဘာကိုယုံပြီးဘာကိုလုပ်ရမှာလည်း
2021-07-17 at 9:26 AM
2021-07-19 at 10:08 PM
ေျပာ ေန တာ ေတြ က. ေလ ထဲ က ေျပာ ေန သ လုိ႔ ဘဲ. ေဇာ္ ေဝ စုိး. အာ ပ လား ဘာ. ျပည္ သူ လူ ထူ က. ကုိယ္ ဘာ ကုိယ္. ဂရု စုိက. ကာ ကြယ္ ေန ၾက ရ တာ. ေျပာ ေန တဲ့. အ ရည္ အ တြက္ က လဲ. ကြဲ လြဲ ေန တယ္. ေျမ ျပင္ အ ေျခ အ ေန နဲ.
အ ယုံ အ ၾကည္ သိပ္ မ ရွိ ဘာ. စိတ္ မ ဆုိး နဲ႔. သံ သ ယ တာ. နည္း နည္း ရွိ တယ္ ေဒါက္ တာ စုိး ေဝစုိး ကုိ.
အာ မ ခံ. မ ရွိ ပါ.
ဒီ လုိ႔ ျဖစ္ ရင္. ဘာ ေဆး ဘာ ေဆး ေသာက္ ဆုိ ၿပီ. တစ္ လုံး မွာ. မ ေျပာ္ သြား ဘူး. စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ထက္ စာ ရင္ မ ဆုိး ဘူး ဆုိး ၿပီ. လက္ ခံ ထား တာ. .
စား စ ရာ အ ခက္ အ ခဲ. ေငြ ေၾကး အ ခက္ အခဲ. စီး ပြား ေရး အ ခက္ အ ခဲ. လက္ နတ္ ကုိင္ ေတြ သူ ခုိး ဘိန္း ရာ ဇာေသတ္ တဲ့. အ ခက္ အ ခဲ O2 အ ခက္ မ ခဲ.
အာ ဏာ သိမ္း ထား ၿပီ. လူ ေတြ ကုိ. လုိက္ သတ္ ေန တဲ့. တ ရုတ္ အ မ လ. အ ဖြဲ႕. ယုတ္ မာ မူ က လဲ. ကမ္း ကုန္. င တ္ လုိ႔. ေသ. တာ က တစ္ မ်ဳိး. .
UK. BBC… က Dr ျမတ္ မာ တင္. ေျပာ ဒါ. မွန္ လုိက္……https://youtu.be/coXlC6qDp9w